फ्लू र कोभिड छुट्याउने लक्षणमा यी हुन् प्रमुख चार भिन्नता
मुख्य पृष्ठHealth Tips स्वास्थ्य जीवनशैलीफ्लू र कोभिड छुट्याउने लक्षणमा यी हुन् प्रमुख चार भिन्नता
विराटनगर । लक्षण एउटै भएको कारण धेरै पटक मानिसहरू कोभिड–१९ वा फ्लूको सङ्क्रमण भएको भनेर छुट्याउन गाह्रो हुने गर्छ । कोभिड र फ्लू दुवै श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग हुन् । जुन जोखिमको डिग्रीमा फरक हुनसक्छन्, तर समान रूपमा प्रसारित हुन्छन् ।
सार्स कोभ २ र इन्फ्लूएन्जा फ्लू ठूलो थोपाबाट फैलेर श्वासप्रश्वासको मार्गमा सीधा सम्पर्क वा दूषित सतहमार्फत सङ्क्रमण गराउँछन् । फ्लूको तुलनामा कोभिड सजिलो तरिकाले फैलिन्छ र केही मानिसलाई अधिक गम्भीर बनाउन सक्छ ।
फ्लू र कोभिडको लक्षण समान छन् । जसकारण लक्षणका आधारमा यी दुईबीचको भिन्नता छुट्याउन गाह्रो हुन सक्छ । ज्वरो, नाकबाट पानी बग्नु, नाक बन्द हुनु, घाँटीको दुखाई, थकान, गन्ध हराउनु, छातीको दुखाई र सास फेर्न गाह्रो हुनु कोभिड र फ्लूका केही सामान्य लक्षणहरू हुन् ।
एचएसईका अनुसार कोभिड र फ्लूबीच भिन्नताको कुरा आउँदा चार मुख्य लक्षण हुन्छन्ः
१. सास फेर्न गाह्रो हुनु वा स्वाँस्वाँ हुनु कोभिडमा सामान्य हुन्छन् तर फ्लूमा हुँदैनन् ।
२. कोरोना भाइरसबाहेक, गन्ध वा स्वाद हराउनु फ्लू भएको बेला खासै हुँदैन ।
३. कोभिडको बिरामीमा टाउको दुख्ने समस्या कम प्रचलित छन् । तर, टाउको दुख्ने समस्या फ्लूको मुख्य लक्षण हो ।
४. कोभिडको कारण धेरैजसो बिरामीमा वाकवाकी अनुभव हनु सक्छ । तर, फ्लूका कारण वाकवाकी हुने समस्या कम हुन्छन् ।